प्रिन्टिंग आधारभूत - Print Peppermint
डिजाइन ब्लग / प्रिन्टिंग बेसिक्स
भर्खरको प्रिन्टिंग आधारभूत लेखहरू
ठूलो ढाँचा / प्रिन्टिंग बेसिक्स
तेस्रोको नियम के हो, र तपाइँ यसलाई तपाइँको ग्राफिक डिजाइनहरूमा कसरी लागू गर्न सक्नुहुन्छ?
फोटोग्राफरहरू प्राय: क्लिक क्लिक क्याप्चरको लागि तेर्साहरूको नियम प्रयोग गर्दछन्। तर ग्राफिक डिजाइनरहरूले यसलाई कुनै डिजाइनलाई सुन्दरताको रूपमा बदल्नको लागि प्रयोग गर्न सक्दछन्। तिहाइको नियम बुझ्न एकदम सजिलो छ, तर यो साधारण अवधारणाले तपाईंलाई वास्तवमै राम्रो डिजाइनर बनाउन सक्छ। तेस्रो को नियम के हो? यो नियम भन्छ ... थप पढ्नुहोस्
ग्राफिक डिजाइन / फोटोग्राफी / प्रिन्टिंग बेसिक्स
यसलाई पप बनाउनुहोस्! तपाईंको ग्राफिक डिजाइनहरूमा कन्ट्रास्ट कसरी सिर्जना गर्ने
जब कुनै डिजाइनमा दुई दृश्य तत्व नाटकीय रूपमा भिन्न हुन्छन्, तब यो विपरित मानिन्छ। जति अधिक भिन्नता, कन्ट्रास्ट त्यति नै राम्रो हुन्छ। फरक स्पष्ट छ भनेर निश्चित गर्नु कन्ट्रास्टको साथ काम गर्ने कुञ्जी हो। तपाईंको डिजाइनको मान, प्रकार, आकार, रंग, र अन्य तत्वहरूमा भिन्नता हुन सक्छ। … थप पढ्नुहोस्
ग्राफिक डिजाइन / प्रिन्ट डिजाइन / प्रिन्टिंग बेसिक्स
सेतो अन्तरिक्ष के हो (नकारात्मक स्थान) र तपाईंले यसलाई तपाईंको ग्राफिक डिजाइनहरूमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ?
एक समयमा जहाँ जानकारी सबै हुन्छ, हामी हाम्रो सामग्रीहरू हामीलाई थाहा भएका सबै प्याक गर्न प्रलोभित हुन्छौं। हामी प्रायः बिर्सन्छौं कि अन्त प्रयोगकर्ताले कसरी हाम्रो सामग्री बुझ्ने छ, र यसलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। यो जहाँ सेतो अन्तरिक्ष आउँदछ। आज हामी सेतो अन्तरिक्षको बारेमा छलफल गर्नेछौं र यसले कसरी तपाईंको… थप पढ्नुहोस्